« prev 1 … 881 882 883 884 885 … 928 next »
Cadde Muuse oo Puntland wada-hadallo u gaaray
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cadde Muuse Xirsi, oo dib ugu noqday Puntland, ayaa sheegay in uu Puntland u gaaray sidii uu wada tashiyo ula qaadan lahaa qeybaha bulshada iyo maamulka, si looga hor tago dhibaato ka dhacda Puntland.
Shirkado dhisaya Muqdisho oo la sii kala reebi doono
Maamulka gobolka Banaadir, ayaa maanta ka dhawaajiyay in shirkado soo dalbaday inay ka mid noqdaan kuwa dhisaya magaalada Muqdisho, ay ka soo reebeen 66 shirkadood, kuwaas oo iyana la kala saari doono.
Afar qof oo xalay Dhadhaab lagu dilay
Sagal Radio Services • News Report • December 22, 2012
Kooxo hubeysan, ayaa xalay Dhadhaab, waqooyi bari, Kenya ku dilay afar ruux oo xoolo dhaqato ahaa, kuwaas oo ka mid ahaa dadka deegaanka.
Mother sentenced in murder of her two-year-old daughter
Minneapolis, Dec 21, 2012 - 23-year-old Minneapolis woman was sentenced to 128 months in prison for the second-degree murder of her daughter, the Hennepin County Attorney announced Friday.
Madfac hooyo ku dilay xalay Muqdisho ilmaheedana dhaawacay
Haweeney dhashay afar caruur ah, ayaa ku dhimatay caruurteeda afarta ahna way ku dhaawacmeen, markii xalay uu madfac ku dhacay guri ay deganaayeen qoyskaasi oo ku noolaa degmada Warta-nabadda ee gobolka Banaadir.
Madaxweyne Siilaanyo oo guddoomiyayaal u magacaabay Saaxil iyo Hargeysa
Madaxweynaha maamulka Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa magaacabay guddoomiyayaasha gobollada Maroodi Jeex (Hargeysa) iyo Saaxil.
Sagal Radio Services • News Report • December 21, 2012
Golaha wasiirada oo shiray iyo wasiir ku xigeen la magacaabay
Golaha wasiirrada xukuumadda oo xalay kulankoodii Khamiislaha ahaa ku yeeshay Muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo faro badan oo ay ka mid yihiin dhismaha gudiyo madax banan oo uu dalku yeesho.